Maxaa Cusub – Page 9 – Shabakadda Amiirnuur
Alshabaab oo la wareegtay Gaari Ciidamada Kenya lahaayeen.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa la wareegtay Gaari nooca Xamuulka ee oo ay lahaayeen Ciidamada Kenya ee Soomaaliya duulaanka ku jooga. Gaarigaan ayaa gacanta lagu dhigay asoo marayay Deegaan u dhaw Magaalada Dhoobleey ee Gobalka Jubada hoose. Ciidamada Kenya ayaa ka cabsanayay in Gaarigaan oo muhiim u ahaa ay Xarakada Shabaabul […]
Sawiro:- Xalane oo la duqeeyay iyo khasaare ka dhashay.
Xarakada Shabaabul Mujahadiin ayaa Maanta Madafiic ku garacday Dhismaha Xalane ee Magaalada Muqdisho kuwaasoo khasaarooyin kala duwan geystay. Madaafiicda ayaa sida muuqata ku dhacay goobihii bartilmaameedka ahaa oo ah xarumaha cadaanka iyo madowguba degna yihiin. war kasoo baxay dhanka Xarakada Shababaul Mujaahidiin Alshabaab ayay ku sheegtay in duqeyntaas iyadu ay […]
Dhegeyso:-Alshabaab oo Bayaan ka soo saartay Weerarkiia y ku Maxaabiista ku furatay.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Bayaan ka soo saartay Weerar ka dhacay Magaalada Xabsiga ugu weyn Magaalada Boosaaso halkaasoo ay ka sii daysay dad gaaraya afar boqol oo ruux oo Maxaabiis ah kuwaasoo qaarkood iyada ka tirsanaayeen. Bayaanka oo uu Faafiyya garabka warbaahineedee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee Alkataaib waxaa akhriyay Sheekh […]
Sawiro Xildhibaan Shil Gaari ku dhintay
Xildhibaan Cali Axmed Dhahar oo ka tirsanaa Baarlamaanka Maamul Gobaleedka Puntland ayaa ku dhintay Shil Gaari xilli uu safar ugu socday dhanka Magaalada Baran. Gaariga ayaa la sheegay in Xildhibaanka uu la gadoomay taasina sababtay in uu geeriyoodo waxaana goor dambe goobta laga qaaday Meydkiisa. Shilkaan ayaa shalay dhacay waxaana […]
Dhegeyso:-Jawaasiis lagu Magaalada Bu’aale
shan nin oo jawaasiis u ahaa Maraykanka iyo Dowladda Federaalka ah ayaa lagu dilay Magaalada Bu’aale ee Gobalka Jubada dhexe kadib markii midka mid ah Maxkamadaha Xarakada Shababaul Mujaahidiin xukunkooda ku dhawaaqday. Jawaasiistaan ayaa ka dambeeyay dil gudaha Magaaladaas horay loogu geystay Nin ka tirsanaa Xaraakda Shabaabul Mujaahidiin iyo duqeymo […]
Dhegeyso; sidee loo arkaa Weerarki Alshabaab boqolaal Maxaabiis ah Puntland uga fara maroojisay?
qaarka mid ah Bulshada Soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay weerarkii dhawaan Xarakada Shababaul Mujaahidiin kula wareegtay Xabsga ugu weyn Magaalada Boosaaso ee Gobalka Bari halkaasoo ay ka sii daysay Maxaabiis gaareysa Afar boqol oo ruux. waxay sheegeen in Xarakadu qaaday Tilaabo loo baahnaa oo aad Muhiim u ah ayna aad […]
Weeraro iyo dilal ka dhacay Shabeelaha hoose iyo Muqdisho
Ciidamada Xarkaada Shababaul Mujaahidiin ayaa xalay dagaalo culus oo saf balaaran ah waxay ku qaadeen saldhigyada iyo fariisimaha Ciidamada Dowladda Federaalk ku leeyihiin degmada Jannaale iyo deegaanada Bariire iyo calamada oo ka wada tirsan gobalka Shabeelaha hoose. hubka noocyadiisa kala duwan ayaa goobahaas la isku weydaarsaday waxaana diryaanka maarta is […]
Qaarka mid ah weeraradii ugu dambeeyay
weerar jid gal ah oo lala beegsaday Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalaka h ayaa ayaa ka dhacay wadada xariirasa Muqdisho iyo degmada Balcad ee Shabaeleha dhexe waxaana halkaa ku dhintay Ciidamo ka tirsan Dowladda Federalaka ah. dhan ka akle ugu yaraan sadax askeri ayaa ku dhintay hal kalena waa ku […]
khasaare badan oo ka dhashay qarax Muqdisho ka dhacay iyo qaramada midoobay iyo turkig aoo ka hadlay
dad gaaraya 25 qof oo ka tirsanaa Dowladda Federaalka ah ayaa ku dhintay Magaalada Muqdisho kadib markii Xalay qarax lala beegsaday. dadka dhintay waxay ka kobnaayeen Saraakiil iyo askar ka tirsan Dowladda Federaalka ah. Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay Mas’uuliyadda qaraxaan Khasaaraha adag lagu gaarsiiyay Dowladda Federaalka ah. dhaawacyada ayaa […]